Rising Voices, manampy ny mponina manerana izao tontolo izao handray anjara amin’ny Resaka manerantany · Global Voices teny Malagasy
Rising Voices, manampy ny mponina manerana izao tontolo izao handray anjara amin'ny Resaka manerantany
Voadika ny 20 Aogositra 2018 6:43 GMT
Noho ny fanohanana mahafatra-po avy amin'ny John S. and James L. Knight Foundation, manomboka tetikasa fanentanana vaovao antsoina hoe Rising Voices ankehitriny ny Global Voices, izay mikendry ny hampiely ny tombontsoan'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ny faritra, ny fiteny sy vondrom-piarahamonina izay zara raha fantatra amin'ny tranonkala fifampiresahana.
Ny Rising Voices dia ho toy ny sandry fahatelo an'ny Global Voices amin'ny fanamafisana ireo feo mahaleotena manerantany, miaro ny zon'izy ireo amin'ny fahalalahana miteny, ary manome fahafahana manerana izao tontolo izao hiditra amin'ny fitaovam-pampitam-baovaon'olon-tsotra araka ny voambara ao amin'ny manifesto antsika. Mba hahatakarana bebe kokoa ny fomba nivoaran'ny fantoka niainga tamin'ny fanangonana votoatim-bilaogy manerantany ka hatramin'ity fanombohan'andraikitra mitsinjo mialoha amin'ny fampielezana ny fitaovam-pampitam-baovaon'olon-tsotra ho an'ireo vahoaka tsy dia voasolo tena loatra ity, tsara ny mijery indray ny taona 2004 raha novolavolaina voalohany ny “Teny fanorenana (ierana)” an'ny Global Voices sy ny fanehoana ny lalan-davitra vitantsika.
Tamin'ny volana Desambra 2004 – mbola talohan'ny firongatry ny bilaogy sy ny fandraisam-peo izay lasa tsy azo ihodivirana amin'ny fiainantsika andavanandro – Nanasa ireo bilaogera manerantany ireo mpiara-manorina ny Global Voices, Ethan Zuckerman sy Rebecca MacKinnon mba hivory any Cambridge, Massachusetts amin'ny andro faharoan'ny fihaonambe momba ny aterineto sy ny Fiarahamonina ao amin'ny Berkman Center. Nanaiky ireo bilaogera mpisava lalana avy any Malezia, Shina, Iràka sy ny any ivelany fa manatri-maso ny fiposahan'ny vanim-potoana fifandraisana vaovao isika izay ahafahan'ny tsirairay manerana izao tontolo izao mandray tombontsoa amin'ny tranonkala itsinjaram-pahefana noho ny fisian'ny fitaovam-pamoahana tahaka ny bilaogy sy ny fandraketam-peo, izay nanova tanteraka ny solosaina rehetra ho gazety azo atao printy sy onjam-peony manokana.
Ity lahatsoratra ity dia tsy natao hahalava andro iainana ny idealisma izay manjaka amin'ny resaka manodidina ny mediam-bahoaka; fa ny mifanohitra amin'izany. Na dia izany aza, tsara ny mitodika indray tamin'ny roa taona voalohan'ny Global Voices ary mampahatsiahy ny sasany amin'ireo tantara sy resadresaka izay maneho ny zava-mitranga rehefa omena ny fahefana haneho ny feony ny olom-pirenena, mba hitantara ny tantarany manokana.
Tamin'ny volana Martsa 2005, nirodana teo ambanin'ny fihetsiketsehana ny fitondran'ny filoha Askar Akayev tao Kyrgyzstan izay nantsoina avy eo hoe Revolisiona Tolipa. Tamin'ny alalan'ny laza vaovaon'ny tontolon'ny bilaogy, nampahafantarina antsika ireo kaonty, sary, ary fanadihadiana nalefa teo noho eo araka ny fivoaran-draharaha. Toy izany koa ny herinandro taty aoriana tany Zimbaboe raha nanitatra ny fifehezany manerana ny firenena ny antoko ZANU-PF an'i Robert Mugabe na dia eo aza ny fiampangana mielipatrana mikasika ny halabatom-pifidianana. Tamin'ny Aprily 2005, nompahafantarin'i Ory Okolloh ho an'ireo mpamaky ny Global Voices voalohany ny vondrom-piarahamonin'ny bilaogy Kenyana izay niorina matanjaka tamin'ny alalan'ny famahanam-bilaogy manara-maso ny governemanta izay mitohy ankehitriny. Iray volana taty aoriana, anjaran'i Ndesanjo Macha indray ny nanome antsika ny fahitantsika voalohany ny tontolon'ny bilaogy miteny Swahili, izay mbola tsy mihoatra ny dimy ambin'ny folo ny isany amin'izao fotoana izao.
Nomena fanehoan-kevitra avy hatrany ihany koa isika raha resy tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ny fifidianana 2005 ny Dr Mostafa Moeen ary avy eo indray tamin'ny volana Aogositra raha nanohitra ireo voatendry ao amin'ny kabinetran'ny filoha vaovao voafidy Ahmadinejad ireo bilaogera eo an-toerana. Raha lasa toerana faleha ho an'ny vaovao isa-minitra momba ny daroka baomba tao Londra tamin'ny taona 2005 ny Wikipedia, nanome ireo fanehoan-kevitra voalohany avy amin'ireo bilaogera Miozolomana sy mpiteny Arabo avy any Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra ny Global Voices. Natao ho an'olona tsirairay sy mitohy ho tahaka izany ny adihevitra momba ny fifanarahana ara-barotra malalaka Amerikanina. Tsy i Iraka ihany no lasa firenena manan-danja ho antsika rehetra, fa eo koa ireo Irakiana tsirairay manokana fitantarana izay nangonin'i Salam Adil.
Niady hevitra momba ny faritra volombatolalaka eo anelanelan'ny fahalalaham-pitenenana sy ny fitarihana herisetra taorian'ny famoahana sariitatra malaza Danoà isika. Tahaka izany, niditra ambaratonga vaovao amin'ny nasionalisma an-tranonkala ny Amboara Manerantany tamin'ny taona lasa (2006) tany Alemaina. Lasa nahazoam-baovao isan'andro ny Revolisiona Aprily tao Nepal tamin'ny taona 2006 noho ireo olom-pirenena tsy mety reraka ao amin'ny tontolom-bilaogy miroborobo ao Kathmandu.
Tsy misy isalasalana fa ny fientanentanana mielipatrana amin'ny fizarana tantara eo an-toerana miaraka amin'ireo mpamaky manerantany izay mamaritra ny Global Voices no dingana manakaiky mankany amin'ny tontolo iray izay manohana ny fifanakalozan-kevitra sy ny fahatakarana ka ihoarany ny tsi-fahalalana sy ny hery bontolo.
Saingy nampianatra antsika ihany koa ireo roa taona lasa fa ny faritra sasany eto amin'izao tontolo izao sy ireo demografika sasany ao anatin'ireo faritra ireo dia nandray tombontsoa avy amin'ny firoboroboan'ny fampahalalam-baovao an'olo-tsotra mihoatra noho ny hafa. Toa mbola saranga antonony na ambony indrindra ny ankamaroan'ny bilaogera sy ny podcasters (mpanangom-peo). Nahavita fianarana ambony ny ankamaroany. Maro koa ireo monina any an-tanàndehibe. Ary amin'ireo tranonkala 70 tapitrisa arahin'ny Technorati ankehitriny, 95% amin'izy ireo no nosoratana tamin'ny fiteny 10 monja. Ny marina dia, ny antsointsika matetika hoe ‘resadresaka manerantany’ dia fifanakalozan-kevitra eo amin'ireo sangany manerantany.
Mamolavola fandaharam-pampianarana amin'ny fiteny maro samihafa izahay ankehitriny, ary ny fomba hianarana ireo taranja izay hanampy ireo mpitarika atrikasa sy ireo evanjelisitry ny fampitam-baovaon'olon-tsotra te-hanazava amin'ny namana sy ny mpiara-miasa mikasika ny fomba hanombohana bilaogy, podcasting, ary bilaogin-dahatsary.
Tsy ho ela dia hambaranay ireo andiany voalohany amin'ny nahazo famatsiam-bola madinika ho an'ireo tetikasa endrika vaovao izay mipaka amin'ny fampitam-baovaon'olon-tsotra amin'ireo vondrom-piarahamonina izay mety tsy afaka mifandray amin'ireo fitaovana media vaovao tahaka ny bilaogy sy ny podcasting. Araho hatrany ny vaovao momba ny fangatahana vatsy ary aza misalasala manoratra izay ahiahy, fanehoan-kevitra na soso-kevitra ao amin'ny [outreach@globalvoicesonline.org].
Azo jerena ao amin'ny tranonkalan'ny Berkman Center ny vaovao fanampiny momba ny Knight Foundation News Challenge natolotra ny Global Voices.